(၂၄.၉.၂၀၂၀) မှ (၇.၁၀.၂၀၂၀) အထိ အလုပျပိတျ တဲ့ ဝနျထမျးတှေ လူ မှု ဖူလုံရေး ၄၀% တှကျနညျး (ရှယျထားပေးပါအုံး …) – Shwe Sar
Homepage / Local News / (၂၄.၉.၂၀၂၀) မှ (၇.၁၀.၂၀၂၀) အထိ အလုပျပိတျ တဲ့ ဝနျထမျးတှေ လူ မှု ဖူလုံရေး ၄၀% တှကျနညျး (ရှယျထားပေးပါအုံး ...)
(၂၄.၉.၂၀၂၀) မှ (၇.၁၀.၂၀၂၀) အထိ အလုပျပိတျ တဲ့ ဝနျထမျးတှေ လူ မှု ဖူလုံရေး ၄၀% တှကျနညျး (ရှယျထားပေးပါအုံး …)
By ssadminPosted on September 28, 2020
(၂၄.၉.၂၀၂၀) မှ (၇.၁၀.၂၀၂၀) အထိပိတျတဲ့ လုပျငနျးတှကေ ဝနျထမျးတှေ လူမှုဖူ လုံရေး ၄၀% တှကျနညျး အကွမျးဖငျြးပွောပွပါမယျ..
ဘယျသူတှရေမလဲ? – ၆ လပိုငျး ၂၀၂၀ အထိနောကျဆုံး ဖူလုံရေးထညျ့သှငျးထားပွီး ၂၃.၉.၂၀၂၀ အထိ အလုပျ လုပျခဲ့သူ‌တှရေပါမယျ.. အလုပျပိတျထားတဲ့ အလုပျက ဝနျထမျးတှပေေါ့.. ကွငွောစာမှာပွနျဖတျကွညျ့နျော..
အလုပျရှငျက လစာပေးထားရငျရောရာလား? – ၁၄ ရကျပိတျရကျမှာ အလုပျရှငျက လစာ အပွညျ့ပေးထားရငျ ၄၀% ကိုအလုပျရှငျက ယူလို့ရပါတယျ.. အလုပျရှငျက လစာမပေးရငျ ၄၀% ခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ.. ဝနျထမျးက တဈဖကျပဲခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ..
အလုပျပိတျတဲ့ထဲမပါတဲ့ စကျရုံတှေ ရောရလား? – မရပါဘူး..
ဥပမာ လစာ (၂) သိနျးနဲ့ သှငျးထားသူ ဆိုရငျ.. ၂၀၀၀၀၀(လစာ) ÷ ၃၀(ရကျ) = ၆၆၆၆ (တဈရကျစာ).. တဈရကျစာ ၆၆၆၆ ကပျြ x ၁၄(ရကျ) = ၉၃၃၃၃ ကပျြရပါမယျ.. ၁၄ ရကျစာ ၄၀% က ဒီလိုတှကျပါတယျ.. ၉၃၃၃၃ ကပျြ x ၄၀% = ၃၇၃၃၃ ကပျြရပါမယျ.. ဒါက ၁၄ ရကျစာပါ.. ကနျြတဲ့ အလုပျဆငျးရတဲ့ ၁၆ ရကျက အလုပျရှငျကပေးပါလိမျ့မယျ..
အစိုးရရညျရှယျခကျြက ပိတျလို့ လစာမရလိုကျသူတှေ အတှကျ ရညျရှယျပါတယျ.. အလုပျရှငျက လူမှုဖူလုံရေးမဆောငျထားရငျ အလုပျရှငျမှာတာဝနျရှိပါတယျ..
အားလုံး ရှငျးကွမယျ ထငျပါတယျ..
Aung Sithu (HR ဘဝ)
(၂၄.၉.၂၀၂၀) မှ (၇.၁၀.၂၀၂၀) အထိပိတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ဝန်ထမ်းတွေ လူမှုဖူ လုံရေး ၄၀% တွက်နည်း အကြမ်းဖျင်းပြောပြပါမယ်..
ဘယ်သူတွေရမလဲ? – ၆ လပိုင်း ၂၀၂၀ အထိနောက်ဆုံး ဖူလုံရေးထည့်သွင်းထားပြီး ၂၃.၉.၂၀၂၀ အထိ အလုပ် လုပ်ခဲ့သူ‌တွေရပါမယ်.. အလုပ်ပိတ်ထားတဲ့ အလုပ်က ဝန်ထမ်းတွေပေါ့.. ကြေငြာစာမှာပြန်ဖတ်ကြည့်နော်..
အလုပ်ရှင်က လစာပေးထားရင်ရောရာလား? – ၁၄ ရက်ပိတ်ရက်မှာ အလုပ်ရှင်က လစာ အပြည့်ပေးထားရင် ၄၀% ကိုအလုပ်ရှင်က ယူလို့ရပါတယ်.. အလုပ်ရှင်က လစာမပေးရင် ၄၀% ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်.. ဝန်ထမ်းက တစ်ဖက်ပဲခံစားခွင့်ရှိပါတယ်..
အလုပ်ပိတ်တဲ့ထဲမပါတဲ့ စက်ရုံတွေ ရောရလား? – မရပါဘူး..
ဥပမာ လစာ (၂) သိန်းနဲ့ သွင်းထားသူ ဆိုရင်.. ၂၀၀၀၀၀(လစာ) ÷ ၃၀(ရက်) = ၆၆၆၆ (တစ်ရက်စာ).. တစ်ရက်စာ ၆၆၆၆ ကျပ် x ၁၄(ရက်) = ၉၃၃၃၃ ကျပ်ရပါမယ်.. ၁၄ ရက်စာ ၄၀% က ဒီလိုတွက်ပါတယ်.. ၉၃၃၃၃ ကျပ် x ၄၀% = ၃၇၃၃၃ ကျပ်ရပါမယ်.. ဒါက ၁၄ ရက်စာပါ.. ကျန်တဲ့ အလုပ်ဆင်းရတဲ့ ၁၆ ရက်က အလုပ်ရှင်ကပေးပါလိမ့်မယ်..
အစိုးရရည်ရွယ်ချက်က ပိတ်လို့ လစာမရလိုက်သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်.. အလုပ်ရှင်က လူမှုဖူလုံရေးမဆောင်ထားရင် အလုပ်ရှင်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်..
အားလုံး ရှင်းကြမယ် ထင်ပါတယ်..
Previous post အွ န်လိုင်းေ ပါ် မှာ ဂယက် ထ သွား တဲ့ စုလှိုင် ဝင်း ရဲ့ အ က ဗီဒီယို အသစ်
Next post ရင်သား အတုလို့ပြောတဲ့ သူတွေအကုန်လုံးကို လာကိုင်ကြည့်လို့ရတယ် ပေးကိုင်ချင်လို့ပါ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး (ရုပ်/သံ)